Naqshadeynta Blackmagic waxay soo bandhigi doontaa Wareejinta Newest At NAB Show New York | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Naqshadeynta Blackmagic waxay kuxiran doontaa 'Switcher Newest At NAB Show New York'
Naqshadeynta Blackmagic waxay kuxiran doontaa 'Switcher Newest At NAB Show New York'
Iyada oo ay tahay Oktoobar dhinaca midig NAB Show New York Waxay isu diyaarineysaa inay noqoto dhacdo xiise leh oo ay kaqeybgalaan xirfadleyda teknolojiyadda iyo warbaahinta. Blackmagic Design ayaa caan ku ah sameynta wax soo saarka ugu tayada sareeya ee fiidiyowga, saxeexayaasha midabka, kamaradaha filimka dhijitaalka ah, fiidiyeyaasha fiidiyowga, kormeerka fiidiyowga, wareejiyayaasha wax soosaarka tooska ah, duubayaasha diskiga, routerka, kormeerayaasha qaabdhismeedka, iyo sawirqaadayaasha filimka ee waqtiga dhabta ah ee filimka muuqaalka ah, soo-saarka kadib iyo warshadaha tabinta telefishanka. Bishan Oktoobar ee soo socota, waxay soo bandhigi doonaan qalabkooda cusub, ATEM Isbahaysiga 8K at NAB Show New York.
The ATEM Constellation 8K waa HD Ultra wareejinta wax soosaarka nool oo leh xNUMX M / Es, 4 x 40G ‑ SDI, wax soo saarka 12 x 24G ‑ SDI, 12 DVEs, 4 Keyers, Ciyaartoyda warbaahinta 16, kuwa wax ku wareysta 4, 4 SuperSource iyo heerarka beddelka mid kasta oo SDI ah. Isku-darka astaamahaas waxay taageerayaan hawlgalka barta 2K aad u xoog badan marka loo beddelo 8K. The ATEM Constellation 8K xitaa waxay leedahay dib-u-hadal wadahadal ah iyo kanaalka 8 xirfadle ah Isku darka maqalka cadaaladda ee loo yaqaan 'Fairlight audio' oo leh EQ iyo dhaqdhaqaaq, oo u saamaxaya isticmaalaha inuu ku xidho oo isticmaalo qalab console maqal oo buuxa ah. Marka lagu daro noqoshada bedelka 8K, ATEM Constellation 8K waxay u adeegtaa kor u qaadida ugu habboon ee Studio-ga Telefishanka ee ATEM.
The ATEM Constellation 8K Waxay Leedahay Muuqaal Kala Duwan Oo Loo Adeegsan Karo Dhacdooyinka Live
Ma ahan wax caqli gal ah in la yiraahdo habka ugu dhaqsaha badan ee loo soo saaro barnaamijyada waa iyada oo loo marayo dhacdo toos ah, iyo ATEM Constellation 8K kaliya waxay ka dhigeysaa suurtagalnimadaas mid dhab ah. Waxyaabaha badan ee loo yaqaan 'ATEM Constellation 8K' ee wax soo saarka badan ayaa u oggolaanaya in loogu isticmaalo riwaayadaha, xafladaha muusikada, iyo dhacdooyinka cayaaraha. Qaddarkan tirada badan ee wax-soo-saarka iyo afar DVEs ayaa xitaa ka faa'iideysan kara isboortiga tooska ah ee hal-abuurka lakabyo badan loo dhisi karo si loo daboolo ficilka.
Isku-xidhka ATEM waa mid aad u weyn, waana HD iyo HD Ultra switcher waa lagu dari karaa si looga shaqeeyo afka hooyo ee '8K'. Isku-darkaan ayaa kaliya siinaya isticmaale awooda awoodda 40 X madax-bannaan ee 12G ‑ SDI marka la shaqeynayo midkood HD or HD Ultra. Xitaa markii loo wareejinayo 8K, tabo-galyadan 40 waxay isu beddeli karaan 10 Quad Link 12G ‑ SDI 8K oo la geliyo isugeyn iyo isugeyn isugeyn ah. Taas macnaheedu waa in isticmaalegu u beddeli karo 720p, 1080p, 1080i, HD Ultra iyo heerarka fiidiyoowga ee 8K isla markiiba. Isticmaalaha ayaa waliba heli kara 4 madax-bannaan HD Ultra wareysiyada badan ee leh awooda loogu beddelo xalka buuxa '8K' aragti guud. Xitaa furayaasha, DVE, Super Source, iyo keith-yada hoose waxay u wareegi karaan 8K hooyo!
Haysashada 8K multiview oo lagu dhisay ATEM Constellation waxay u oggolaaneysaa isticmaale inuu kormeero ilo badan oo ay weheliyaan 4 wax soo saar badan oo madaxbannaan oo madaxbannaan oo shaqsi ahaan loo qaabeyn karo ama loo beddeli karo hal-cabbir buuxa oo 8K ah markii loo beddelo 8K. Dhammaan wax-soo-saarka dibedda ah iyo dhammaan ilaha gudaha waxaa loo marin karaa aragti kasta oo shakhsiyaadka isweydaarsiga shaqsiyadeed si madax-bannaan ayaa loogu dejin karaa 4, 7, 10, 13 ama 16 aragtiyo isku mar ah. Aragti kastaa waxay leedahay xaalad shaashad ah oo ay kujirto calaamado gaar ah, mitirrada V iyo isugeyn. Afarta 12G ‑ SDI wax soo saar badan ayaa taageera HD iyo HD Ultra ilaa 2160p60, iyo ilaa 4320p60 iyada oo loo marayo Quad Link 12G ‑ SDI markii loo wareejiyay 8K.
ATEM Constellation 8 K Waxay Kordhinaysaa Awoodda Warbaahinta Sare
Naqshadeynta 'ATEM Constellation 8K' compact 2RU rack mount design waxay u oggolaaneysaa hawlgalka furaha adeegsiga xaaladaha degdegga ah, waxaana ka mid ah LCD ballaaran oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu arko soo-saarista barnaamijka iyo inuu beddelo dejiyaha beddelaadda iyadoo la adeegsanayo menus shaashadda. Qaybta dambe ee wareejiyaha waxay leedahay wax soo saar ballaaran 40 x 12G ‑ SDI, 24 x 12G ‑ SDI aux wax soo saar, oo lagu daray maqal dheellitiran, Ethernet, xakamaynta RS ‑ 422 iyo MADI maqal dheeri ah oo dheeri ah oo loogu talagalay qalabka dhalada ee 'Fairlight' inkasta oo ay tahay kaliya 2RU cabir.
ATEM waxay bixisaa kala-guurno badan
ATEM Constellation 8K waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo tayo-baahineed oo 8K ah oo ah wareejinno waddaniyadeed oo lagu habeyn karo iyada oo la waafajinayo cabbirrada sida dhererkooda, midabka xadka, ballaca xadka, booska, iyo jihada. Kala guurkaan waxaa ka mid ah:
Kala-guurka ayaa si buuxda u dhashay 8K isla markaana isticmaale ayaa sidoo kale heli kara isbeddellada DVE ee xiisaha leh, kuwaas oo ku habboon masaxayaasha garaafka iyo xitaa xayiraadaha marka loo adeegsado cayaartoyda warbaahinta gudaha. Si loo baabi'iyo khaladaadka, ATEM Constellation 8K waxay leedahay muuqaal kala-guur ah oo siiya dadka isticmaala fursad ay ku hubiyaan kala-guurka ka hor intaan hawada la saarin!
Blackmagic Design'ATEM Constellation 8K' waa beddelihii ugu horreeyay ee wax soo saar toos ah oo ku dhex jira wax soo saarka maqalka ee xirfadlaha ah. Waxay kuxirantahay qunsul iskuxirka iftiinka cadaalad ah, xitaa waxaa loo isticmaali karaa in laguqasusiyo dhawaaqa maqaayadaha analogga microphone-ka ee loo isticmaalo codka kor.
NAB Show New York waa isu imaatinka ugu fiican ee warbaahinta, madadaalada iyo xirfadleyda tikniyoolajiyada. Waxay dhici doontaa Oktoobar 16-17, 2019. The Blackmagic Design bandhig ayaa lagu qaban doonaa qolka N403.
Si aad isu diiwaangeliso NAB Show New York, markaa riix halkan iyo in waxbadan laga barto Xiddigta ATEM 8k, ka dibna hubi www.blackmagicdesign.com.
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News 2019 Astaanta ATEM ATEM Isbahaysiga 8K Blackmagic Design Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Idaacadan Convention Broadcasting Convention Dulmarka NAB NAB 2015 NAB 2016 NAB Show New York NAB16 nabshow 2019-09-30
Previous: Calrec wuxuu sii wadaa is riixitaanka si loogu gudbo barnaamijka 'Interoperability True IP' ee Imtixaankii Imtixaanka Isgaarsiinta JT-NM ee dhawaanta
Next: Raadinta Multi-Media Studio Raadinta Interns